Amandy nendasina, mahazatra ny gastronomy Murcian, amin'ny Thermomix | ThermoRecipes
Appetizers35 minitraOlona 100g100 kaloria
Raha te-hiomana aperitifa mora sy hafa ianao amin'ity faran'ny herinandro ity dia mariho ireto amandy nendasina.
Tsy ela aho no tsy tany Murcia, fa rehefa nipetraka tany aho dia ilay tapa mahazatra amin'ny bar maro ary tena tsara ry zareo. Soa ihany fa misy zavatra izay tsy miova mihitsy ka mieritreritra aho fa hitohy ny hanaovana izany. Vitako izany Thermomix, mampiasa menaka kely dia kely (20g fotsiny) ary tsy mila mampihetsika na mijery fa tsy may izy ireo.
Ho an'ireo mpankafy ny gastronomy Murcian Ampahatsiahiviko anao fa tao amin'ny bilaogy dia efa navoakanay ny tantsambo ary ny zarangollo. Topazo maso raha tsy fantatrao izy ireo satria tianao izy ireo.
1 Amandy nendasina ao amin'ny Thermomix
2 Fitoviana amin'ny TM 21
Ampianarinay ianao hanao sakafo tsy azo tohaina: amandy nendasina ao amin'ny Thermomix, mampiasa menaka kely ary tsy dia may loatra.
20 g menaka oliva malefaka
Amandy manta voadio 100 g (tsara indrindra amin'ny karazany Marcona)
Sira 1 sotro
Nasianay menaka tao anaty vera sy programa 1 minitra, maripana varoma, hafainganana sotro.
Ampidirinay ny amandy sy ny programa 30 minitra, fihodinana havia, varoma tempera, hafainganana sotro.
Napetrakay teo ambony lovia, lovia na lovia lalina ny sobika. Rehefa tapitra ny fotoana dia apetratsika ao anaty harona ireo amandy (latsaka ao anaty fitoeram-bokatra izay napetrantsika ao ambany) ny menaka ary avy eo amin'ny lovia rakotra taratasy mifoka. Nametraka ny sira avy hatrany izahay ary nanetsiketsika kely ny almond mba hifikitra amin'izy rehetra ny sira.
Vina kely (100g) izy io, fa raha manana ambiny kosa ianao, dia azonao atao ao anaty siny fitaratra voasarona tsara.
Fitoviana amin'ny TM 21
Fanazavana fanampiny - tantsambo, zarangollo.
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Appetizers, Sakafo rezionaly
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Appetizers » Amandy nendasina ao amin'ny Thermomix
Antonio Villen dia hoy izy:
Azo atao amina habe bebe kokoa ve izy ireo? Ao an-tranoko izy ireo tsy mihinana, mandany
Valiny tamin'i Antonio Villén
Andramo izany, satria azo antoka fa amin'ny 200 g dia ho tsara aminao koa izany. Raha tianao dia ampitomboy kely ny menaka fa tsy betsaka. Alohan'ny namoahana ny recette dia nanao fitsapana nandrakotra amandy tamin'ny diloilo aho ary tsy niova firy ny valiny.
Manantena aho fa tianao izy ireo.
reme08 dia hoy izy:
Tsara ny mahafantatra fa afaka manao koa ianao ary tsy matahotra ny ho may
Valiny amin'ny reme08
Ho hitanao fa tsy dia volamena tahaka ny ahafahany mivoaka ao anaty lapoaly izy ireo fa tena tsara koa.
30 minitra ve tsy fotoana maharitra?
Ao anaty lapoaly dia vita ao anatin'ny 10 minitra na latsaka izy ireo fa eto kosa dia maharitra ela kokoa izy ireo vao mahazo volontany. Na izany na tsy izany, andramo ajanona ny milina aorian'ny 15 minitra hahitanao izay hevitrao.
Sylvia Casarrubios dia hoy izy:
Salama, nomena amandy be dia be aho, saingy ny manendasa azy dia tsy maintsy hodarako aloha avy amin'ny hoditra volontany manarona azy ireo ... ahoana no anaovana azy? MISAOTRA
Valiny tamin'i Sylvia Casarrubios
Mba hanesorana ny hoditra dia mila mandrehitra azy ireo ianao, amin'ny rano mangotraka. Rehefa avy mibontsina mora foana izy ireo dia ho hitanao.
Mary Rose dia hoy izy:
Manana amandy aho 2 taona lasa izay ary heveriko fa somary rrancias izy ireo, izany hoe, hain'izy ireo ny mamerina azy ireo
Mamaly an'i maria rosa
Salama Maria Rosa,
Tsy haiko izay azonao atao hamerenana azy ireo. Miezaha manao azy ireo toy izao, tsy ho very na inona na inona ianao 😉
Manana amandy aho….
Tsy maintsy vitaina na tsy misy ny goblet ????
Valiny tamin'i Paqui
Aleo miaraka amin'ny goblet.
Nanana azy ireo aho nandritra ny 30 minitra ary mbola manta ihany izy ireo !!!! ??
Ary raha mangatsiaka indray, hita ihany koa izy ireo?